Ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab Oo Weeraray Magaalada Finow. – Calamada.com
Ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab Oo Weeraray Magaalada Finow.
calamada July 28, 2016 1 min read
Wararka laga helayo dhulka Kenya xooga kaga heysata Somalia gaar ahaan magaalada Mandheera iyo deegaanada ku dhaw dhaw waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar qorsheysan ku qaadeen magaalada Finow oo ka mid ah magaalooyinka ku dhaw dhaw Mandheera.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey saqdii dhexe ee xalay si toos ah u beegsadeen saldhiga ciidamada Nasaraad Kenya ee deegaankaasi balse dagaal culus goobta kama dhicin kadib markii askarta Nasaarada Kenya magaalada ka carareen.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa baahisay in ciidamada Mujaahidiinta ay gubeen xarunta shirkada isgaarsiinta Safari Com oo ah shirkada isgaariinta dowlada Nasaarada Kenya.
Sidoo kale ciidamada Xarakada Shababul Mujaahidiin waxey gudaha u galeen hooyga gudoomiyaha dowlada Nasaarada Kenya ugu magacaaban magaalada kaasi oo markii Mujaahidiinta ay soo galayeen magaalada hooygiisa kasii cararay.
Sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta ayaa qarax miino la beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Nasaarada Kenya oo saaka doonayay iney gurmad usoo sameeyaan magaalada Finow oo xalay Mujaahidiinta Alshabaab la wareegeen.
Radio Andalus ayaa intaasi ku daray in qaraxa miino lagu dilay 6 askari oo Kenyaati ah islamarkaana la gubay gaari Kooyal ah oo miinada ay la kacday.
Dhawaan ayeey aheed markii weerar ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen gudaha Jaziirada Lamu ay ku gubeen gaari dagaal tiro askar Kenyaati ahna ay ku dileen.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 23-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 23-10-1437 Hijri.